HAKA QUUSAN RIYADAADA! Afar Sanno Ka Hor Wuxuu Ahaa Darawal Dadka Talaajadaha U Geeya, Xalayna Champions League Ayuu Gool Ka Dhaliyay - Laacib
HomeSerie AHAKA QUUSAN RIYADAADA! Afar Sanno Ka Hor Wuxuu Ahaa Darawal Dadka Talaajadaha U Geeya, Xalayna Champions League Ayuu Gool Ka Dhaliyay
HAKA QUUSAN RIYADAADA! Afar Sanno Ka Hor Wuxuu Ahaa Darawal Dadka Talaajadaha U Geeya, Xalayna Champions League Ayuu Gool Ka Dhaliyay
Junior Messias waxaa soo martay afar sanno oo xusuus u leh, isagoo ahaa darawal dadka talaajadaha u geeya, wuxuuna xalay gool ka dhaliyay tartanka Champions League isagoo u ciyaaraya kooxda weyn ee AC Milan.
Weeraryahanka reer Brazil ayay riyadiisa u rumowday xalay ka dib markii uu madax ku dhaliyay kulankii ay ka badiyeen Atletico Madrid ee Champions League, iyadoo ay u aheyd markii ugu horeysay ee uu ka ciyaaro tartankaan.
Guushaan waxay ka saaciday AC Milan inay sii nooleyso rajadeeda ay ugu soo bixi karo wareega 16ka iyagoo farqiga goolasha kaga horeeya kooxda kaalinta afaraad ee Atletico Madrid.
Porto ayaa hal dhibic ka sareysa AC Milan, iyadoo Liverpool oo la ciyaareyso Milan kulanka ugu danbeeya wareega group-yada ay durbaba ku soo baxday kaalinta 1aad.
Messias ayaa la soo geliyay ciyaarta markii ay saacad socotay isagoo garoonka la soo galay xiddigaha waa weyn sida Zlatan Ibrahimovic, Luis Suarez iyo Antoine Griezmann.
Laakiin kooxda AC Milan ayaa ugu danbeyn heshay guusha markii uu Messias madaxa ku dhaliyay goolka guusha daqiiqadii 87aad.
Waxay aheyd waqtigii ugu fiicnaa waayihiisa ciyaareed isagoo u kacay karoos uu soo dhigay Franck Kessie, wuxuuna ku guuleystay inuu kubada dabamariyo goolhayaha Atletico Jan Oblak.
Messias ayaa u guuray Talyaaniga markii uu 20 sanno jir ahaa sannadkii 2011, wuxuu hore u soo kaxeeyay xaaskiisa iyo wiilkooda, wuxuuna la degay walaalkiis oo ku nool magaalada Turin, wuxuuna u ciyaari jiray kooxo xaafadeed marka uu firaaqada yahay.
Wuxuu bilaabay inuu kubada cagta xirfad ka dhigto markii uu ahaa 24 sanno jir isagoo ku biiray kooxda heerka shanaad ee Casale, wuxuu u dhaliyay 21 gool 32 kulan uu u saftay.
Messias ka dib wuxuu ku biiray kooxda heerka afaraad ee Chieri. Wuxuu kooxdaan u dhaliyay 15 gool 34 kulan uu u ciyaaray.
Ka dib wuxuu ku biiray kooxda Gozzano oo u soo dalacday horyaalka heerka seddexaad ee Serie C, wuxuuna u ciyaarayay ilaa iyo sannadkii 2019 ka hor inta uusan ku biirin kooxda Serie B ee Crotone.
Ka hor inta uusan noqonin xirfadle kubada cagta ah, Messias wuxuu ka shaqeynayay goobaha dhismaha isagoo sameyn jiray dhagaxa bulukeetiga, wuxuu sidoo kale ahaa darawal dadka u geeya talaajadaha ay iibsadaan.
Laakiin markii uu wacdarro u dhigay kooxda Crotone oo u soo dalacday Serie A xilli ciyaareedkii 2019-20, wuxuu soo jiitay AC Milan oo amaah hal sanno ah kula soo wareegtay xagaagan isagoo 30 sanno jir ah.